प्रोमार्क Test परीक्षण गर्दै ... केवल फोटोहरू - जिओफुमाडास
जुन, 2010 जीपीएस / उपकरण
जसको कोर्स मैले उनीसँग कुरा गरेका थिएहामी म्यागेलन प्रोमार्क GPS जीपीएस, मोबाइल म्यापर between. बीच चाचो गरिरहेका थियौं। चाखलाग्दो कुरा के छ कि सर्वेक्षण मोडमा एउटा नेटवर्क स्थापना गर्न सकिन्छ, जससँग पोष्ट प्रोसेसिंग एकल उपकरणको साथ मात्र गरिएको छैन। यी सर्तहरूमा छोटो अवधिमा २ सेन्टिमिटर शुद्धता सम्भव हुने सम्भावना छ, जबकि मोबाइलमेलरको साथ मात्र एउटा कम्प्युटरको पछाडि प्रोसेसिंगले उप-मिटरमा कब्जा गर्न अधिक समय लिन सक्दछ।
छनौट गरिएको स्थान एक रमणीय शहर थियो, एकदम अनियमित टोपोग्राफीको साथ, यी देशहरूको विशिष्ट। फेयरको हल्लाले हामीलाई कम प्रभाव भएको ठाउँ फेला पारेपछि हामीले प्रक्रिया शुरू गर्यौं।
हामीले बिर्सेका थियौं कि खाजा खानु आवश्यक थियो, ती केटाहरू, पागल मौसमको बावजुद, धेरै मध्य अमेरिकाका देशहरूमा विपत्ति निम्त्याउने अगाथा आँधीको पहिलो दिनको बावजूद। वैसे म सिफारिश गर्दछ तपाई Segeplan द्वारा लागू क्षति अनुगमन दर्शकहरु हेर्नुहोस् ... राम्रो, कति उन्नत छ यी साथीहरू अन्तिम पटक देखि मैले उनीहरूको समीक्षा गरे.
प्राविधिक नतिजाहरूको बारेमा कुरा गरिसके गर्नु अघि, मैले केहि रिपोर्ट छोड्छु कि टेक्निकल रिपोर्टले के भन्न सक्दैन।
यो eBay मा उडेको कतिको लागि मैले पाउनेछु ...
... मैले कसम खाएँ कि यी उपकरणहरू मध्ये एक मध्ये मालिकले हामीलाई महिलाहरु संग गर्भवती हुने छैन हेर्न हेर्न प्रयोग गरिन्छ ...
मलाई मद्दत गर्नुहोस् भगवान, यो कुरा के हो ... मलाई सम्झना छ ...
ओह! मैले पहिले नै यो बिर्सें ...
र त्यो ...
- ... र तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं हामीलाई यो भुक्तानी गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
- mmm ... शायद उनि हामिलाई दोपहर को भोजन दिनुहोस
- तर यो दोहोरो दोहोरो छ!
हेर कति प्यारा!
सबैजना आइपडहरू जाँदै हुनुहुन्छ र हामीलाई यस आधारको हेरचाह गर्न छोड्ने छ।
... र ठण्ड यो गर्दैछ।
... रोक्नुहोस्, यो पहाड हेर्नको लागि केवल क्यूई हो जस्तो लाग्छ।
वाह, यो केबल अलि लामो छ। कसले जान्दछ यदि यो गाईको कपालभन्दा राम्रोसँग काम गर्दछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो Microstation मार्फत VBA अनुप्रयोगहरू विकास गर्दै
अर्को पोस्ट माइक्रोस्टेशन: मुद्रण लेआउटअर्को »
२ जवाफ "परीक्षण Promark2… फोटो मात्र"
तपाईं सक्नुहुन्न; मोबाइल म्यापर6ले पोस्ट प्रोसेसिंगको समर्थन गर्दैन, यसको अर्थ यो यो रोभरको रूपमा डेटा खिच्न सक्दैन र त्यसपछि अर्को यन्त्रको आधारमा पोस्ट-प्रोसेस गरिएको हुन सक्छ जुन बेसको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
मोबाइल म्यापर लाइनबाट, तिनीहरू केवल पोष्टप्रोसेसिंग समर्थन गर्दछन्: मोबाइल म्यापर प्रो, मोबाइल म्यापर सीएक्स, मोबाइल म्यापर 100 र प्रोमार्क।
Isc Marco Grajales भन्छिन्:
शुभ दिउँसो, म जान चाहन्छु कि यदि तपाईं मलाई एक संदेहबाट मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। हेर, मेरो प्रोमोर्क3RTT जीपीएस र एक म्याजेल मोबाइल म्याप6छ र म चाहानुहुन्छ कि त्यहाँ दुवै आधार (प्रोमर्क) प्रयोग गर्ने ब्राउजर र ब्राउजर रोभर गर्ने तरिका हो। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, कन्फिगरेसन कसरी गरिन्छ भनेर मलाई बताउन सक्नुहुन्छ?